Europe, ndị mara mma n'ala nke ịma mma na akụkọ ifo bụ ịrụ ụka adịghị a-aga na-ebe maka ọ bụla njem riri si n'ebe. Na-enweghị atụ egwu edemede ebe nleta, Europe bụ maara na-otu n'ime ndị mara mma ná mba ọzọ ọmụmụ n'ógbè nlekọta ọrụ maka International ụmụ akwụkwọ dị ka nwere ihe-apụghị ịgụta ọnụ bounty nke osimiri, isuo, ulo elu, castles, na akụkọ ihe mere ihe ncheta.
Salzburg emi odude na ókè-ala nke Germany, n’obodo Austria, na bụ cuddled site oké Eastern Alps na bụ n'ezie a n'anya n'anya. Nke a ebube na Lesser Mara Mara mma ebe obodo bụ ebe omumu nke Mozart, na ama music andiwet, onye
Gịnị bụ otu ugboro ihe ochie obodo, Constanta bụ nke atọ kachasị ukwuu na Romania obodo na ihe Nta Mara Mara Mma aga na Europe, na ọdụ ụgbọ mmiri na-eme mkpọtụ nke dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Osimiri Ojii.
Constanta bụ n'ụlọ ka ọtụtụ verifiable njem nleta hotspots aga azụ iri na narị afọ, gụnyere Ovid Square, ebe a ọla oyiyi nke Roman artist Ovid anọchi, na hapụ Constanta cha cha, nke atụmatụ ndị ije nke Art Noveau. Constanta dika nwere eleghị anya ndị kasị ụtọ seashores, ebe ị ga- nweta ohere sunbathe na esighi ike elu. Ọ bụrụ na ị na-na-adventurous ọnọdụ, enwere njem ọtụtụ ụbọchị si Constanta, nke na-agụnye na-eleta abụọ UNESCO Heritage Sites ya bụ Danube na Tulcea tinyere atụrụ ndụ kwupụta ọgwụgwụ na a ama beach eme, Mangalia.
Zoro n'okpuru onyinyo nke niile ọzọ ọwọrọiso Belgium mepere emepe obodo dị Antwerp na Brussels, Ghent bụ a zoro ezo mkpuru na Belgium. Na-akpali mmasị obodo na anya-erughị aghara, Ghent bụ ya zuru ezu nta mee ka-eru gị ala na nnukwu iji na-ose elu gị ahụmahụ. Ọ bụrụ na ị na-ụtọ nke mara mma ngosi ihe mgbe ochie, trendy Ogwe, na kanaal n'akụkụ echiche, ị ga-maa chọrọ tinye Ghent gị njem njegasi. A òkè nke ebe ekwesịghị ịdị ileghara anya na-agụnye Gravensteen, a-iri-na narị afọ mansion na ọwa mmiri na-eju echiche, ndị Belfry nke Ghent, na St Mụta Cathedral.
Tụlee eleta Helsinki n'oge ya ebighi-ebi n'oge okpomọkụ ụbọchị mbo mbuli gị oge e ma ọ bụ na-etinye na gị gutsy akpụkpọ ụkwụ na-alụ ọgụ nke blanketed oyi mgbede. Otu ọ dịla, e nwere ndị dị otú ahụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nlegharị anya na-ahụ, ị ga-enweghị nhọrọ kpam kpam ekpughe ihe nzuzo ọ bụla ọ na-ejide!
Gothenburg, dị na Sweden, bụ n'ụlọ ka Liseberg ogige ntụrụndụ, otu n'ime n'elu na-adọrọ mmasị na mba albeit ịbụ otu n'ime ndị Lesser Mara Mara mma ebe. Ọ bụkwa nke abụọ-obodo kacha ibu na obodo nke bụ n'ofè atọ ọchị ruru ya inclusiveness nke ma ala na oké osimiri na ya dịgasị iche echiche dị ka "Fika" (a Concept nke ịnụ ụtọ kọfị oge izu) na Feskekorka (Fish ụka) Gbalịa na-eleta obodo a na August na-agba àmà ha ịtụnanya music ememme mara dị ka Ụzọ Mgbapụ West. Ekwe omume ileta n'oge a? The obodo ga- o inwe dị ka a obi ụtọ niile uche ziri ezi na-ahụ mara mma sceneries,
Gbasaa na Croatia bụ ebe kachasị mma mara mma maka ezumike ma ọ bụrụ na ị na-achụ nta maka ime ala gbara osimiri okirikiri obodo ịgwakọta na jụọla oyi Mediterranean vibes. The Dalmatian nri ebe a tinyere ọhụrụ Erimeri ga-mmetuaka uche ziri ezi ma na-ị na gị na ikpere!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flesser-known-beautiful-destinations%2F%0A%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
ebe ndị mara mma njem Europe ubé-ntakịrị okpu-ebe obere obodo nke kacha nta